किन रिसाए वडाध्यक्षहरु ? – sunpani.com
किन रिसाए वडाध्यक्षहरु ?
सुनपानी । १० माघ २०७६, शुक्रबार मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज – नेपालगञ्जमा ठूलो राशीको क्रिकेट शुरु भएको छ । मंगलप्रसाद माविको प्राङ्गणमा जादा नै थाहा भइहाल्छ, कति ठूलो प्रतियोगिता हो भन्ने कुरा । स्कूलको मैदान नै झकिझकाउ छ । ब्यानर र फ्लेसबोर्डले मैदान रंगीचंगी देखिन्छ ।
द ग्रुप अफ सिस्टिन क्लवले लामो तयारी गरेर प्रतियोगिताको शुरुवात गरेको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रत्येक वडाहरु प्रत्यक्ष जोडिएको प्रतियोगिताको उद्घाटनमा भने सबै वडाहरु रिसाएको देखियो ।
किन रिसाए वडाध्यक्षहरु ? किन उद्घाटनको मञ्च बहिष्कार गरेर स्कूलको गेटबाहिर जम्मा भएर बसे ?
वडाध्यक्षहरु सामुहिक रुपमा भन्दै थिए, पैसा दिने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र वडा कार्यालय, अतिथि बन्ने अर्को व्यक्ति ? वडाध्यक्षहरु मेयर या उपमेयरलाई अतिथि बनाएर प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्न चाहन्थे । पटक–पटक बैठक र छलफल गरिरहने आयोजक र वडाध्यक्षहरुका बीचमा यो उद्घाटन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा किन छलफल भएन ?
प्रतियोगिताको उद्घटन पूर्वमन्त्री एवं सांसद मो. इस्तियाक राईले गरिरहदा वडाध्यक्षहरु मञ्चमा बस्न गएनन् । पूर्वमन्त्री एवं सांसद राईसँग वडाध्यक्षको कुनै गुनासो थिएन । खाली आयोजकले किन सबै सल्लाह गरिरहदा उद्घाटनको कार्यक्रम भनेनन् भन्ने थियो ।
यद्यपि, वडाध्यक्षहरुले खेलमा सहयोग गर्ने बताएका छन् । मञ्च नजिक उभिरहेका वडाध्यक्षहरु स्कूलको गेटबाहिर निस्केर सामुहिक छलफल गरेका थिए । त्यहाँ सबैजसो वडाध्यक्ष उपस्थित थिए । प्रतियोगितामा नेपालगञ्जका २३ वटै वडाको सहभागिता रहेको छ । प्रतियोगिताको विजेताले दुई लाख रुपैया पाउनेछन् । यो दोस्रो अन्तर वडा क्रिकेट प्रतियोगिता हो ।